सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्वमै रिट, के राजीनामा देलान त शर्मा ? — Motivatenews.Com
सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्वमै रिट, के राजीनामा देलान त शर्मा ?
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका कान्छा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध रिट दायर भएको छ । नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले शर्माका विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन ।
थापाले करिब १५ दिनअघि पेस गरेको निवेदन सोमबार मात्र सर्वोच्च प्रशासन दर्ता गरेको छ भने मंगलबारका लागि पेसी पनि तोको छ । बैशाख पहिलो साता सर्वोच्चमा शर्मासहित ५ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्तीलगत्तै थापाले इजलास बहिस्कार गर्दै विरोध जनाएका थिए।
शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदलाई पनि थापाले विपक्षी बनाएका छन् । शर्माले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्ने गरी निरन्तर वकालत र बहस नगरेको, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको ५ वर्षे अनुभव पनि उनीसँग नभएको थापाको तर्क छ।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ। उच्च (साविक पुनरावेदन) अदालतको न्यायाधीश भएको कम्तीमा ५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
शर्मा यसअघि २ वर्षसम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । उनीसँगै २८ जना न्यायाधीश त्यतिखेर पदमुक्त भएका थिए।
न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको जोडबलमा शर्मा सर्वोच्चमै नियुक्ति भएका हुन् ।
राणालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले तत्कालीन पुनरावेदनबाट सर्वोच्च ल्याएका थिए । त्यसैको गुन तिर्न आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले शर्माका भतिजा मनोजलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको भन्दै यो नियुक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो।